४ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएका छन् । शुक्रबार पोखरेलले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनीको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे । उनको पक्षमा ३१ सांसदले मतदान गरे । ५८ सांसदले मतदान गरेकामा नेकपा एमालेका २७ सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । नेपाली […]
गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपालीले पाए विश्वासको मत
पोखरा / गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत खसेको हो । प्रस्तावको विपक्षमा २७ मत खसेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा ५८ सांसद उपस्थित थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार... The post गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपालीले पाए विश्वासको मत appeared first on Purbeli News.
काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ। संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनले धारा १६८(६) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सोहीअनसार उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। उनलाई कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपालीले ४ गते विश्वासको मत लिने
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले असार ४ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। गत शनिवार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद सर्वोच्चले खारेज गरेपछि सांसद संख्या ५९…
पर्वत : नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकारले आउँदो असार ४ गते शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएको छ।गत जेठ २९ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि बहुमतसहित पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पाएका थिए। संयुक्त गठबन्धनमा स्वतन्त्र एक सांसद दीपक मनाङेसहित ३१ सांसदको समर्थनले सरकार बनेको थियो।संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारले उपधारा ६ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअन
प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् । बिहीबार विश्वासको मत लिन गुरुङले प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेस...
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत दिन उनकै मन्त्रीपरिषदका सदस्य अनुपस्थित भएका छन्।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन गण्डकीमा विपक्षीको ह्वीप, प्रदेश प्रमुखलाई भने- जालझेलमा नलाग्नुस्
प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आगामी बिहीबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गर्दै मंगलबार प्रदेश सभा...